အရှေ့တစ်ဝက်အဝိုင်းသရ - ဝီကီပီးဒီးယား
(Mid front rounded vowel မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
အရှေ့တစ်ဝက်အဝိုင်းသရ (အင်္ဂလိပ်: mid front rounded vowel) သည် အပြောဘာသာစကားများစွာတွင် အသုံးပြုသော သရသံ အမျိုးအစားများထဲက ပုံစံတစ်ခုဖြစ်၍ နိုင်ငံတကာသဒ္ဒဗေဒအက္ခရာတွင် တစ်ဝက်ပိတ်သရ [ø] နှင့် တစ်ဝက်ဖွင့်သရ [œ] ကြားရှိ အရှေ့တစ်ဝက်အဝိုင်းသရကို ကိုယ်စားပြုနိုင်သော အက္ခရာမရှိပေ။ ပုံမှန်အားဖြင့် ⟨ø⟩ အဖြစ်သာရေးသားကြသည်။ တိကျမှုကိုလိုအပ်ပါက အသံဖြည့်စွက်စကားလုံးကိုသုံး၍ ⟨ø̞⟩ သို့ ⟨œ̝⟩ ဟူ၍ ရေးသားနိုင်သည်။
အရှေ့တစ်ဝက်ဖိကပ်သရကို အိုင်ပီအေစနစ်တွင် စံအားဖြင့် ⟨ø̞⟩ သို့ ⟨œ̝⟩ ဟူ၍ ဖလှယ်ဖော်ပြရေးသားကြသည်။ အိုင်ပီအေ၌နှုတ်လမ်းဖိကပ်ခြင်းအတွက် ဖြည့်စွက်သင်္ကေတမရှိသော်လည်း နှုတ်ခမ်း ဖိကပ်ခြင်းကို အောက်ပါအတိုင်း ရေးသားဖော်ပြနိုင်သည်။ အက္ခရာ တမ်းပလိတ်:IPAalink ကို ⟨e̞͡β̞⟩ / ⟨ɛ̝͡β̞⟩ ([e̞] / [ɛ̝] နှင့်အတူ နှုတ်ခမ်းကပ်ခြင်းပုံစံ) ၊ ⟨e̞ᵝ⟩ / ⟨ɛ̝ᵝ⟩ ([e̞] / [ɛ̝] တို့ကို နှုခပ်းကပ်ခြင်းပုံစံဖြင့် အထူးပြုရေးသားမှုပုံစံ) တို့ဖြစ်သည်။ နှုခမ်းဖြန့်ခြင်းကို ဖြည့်စွက်အသံသင်္ကေတ ⟨ ͍ ⟩ သုံးနိုင်ပြီး အဝိုင်းသရများကို တွဲကပ်၍ အပြန့်သရဖြစ်စေရန် လိုသလို သုံးနိုင်သည်။ ဥပမာမှာ ⟨ø͍˕⟩ / ⟨œ͍˔⟩ ဖြစ်သည်။
လျှာ၏ ရှေ့နောက် အနေအထား၌ လျှာသည် ခံတွင်း၏ အရှေ့ဖက်သို့ ရောက်ရှိနေသည်။ သို့သော် ဗျည်းသံဖြစ်ပေါ်သည်အထိ ပိတ်ဆို့လိုက်ခြင်းမပြုရချေ။
အဝိုင်းသရဟူ၍ ခေါ်ဆိုရာ၌ နှုတ်ခမ်းကို ဝိုင်း၍ ချပ်ကာ (compressed) ထွက်ရှိသည်။ နှုတ်လမ်းသားအစွန်းများသည် တင်းတင်းရင်းရင်းဖြင့် ဆွဲယူ၍ ချပ်ချပ်ကပ်ကပ်ပုံစံဖြစ်ကာ နှုတ်ခမ်း၏ အတွင်းသားများ မပေါ်လွင်စေရပါ။
Árnason၊ Kristján (2011)၊ The Phonology of Icelandic and Faroese၊ Oxford University Press၊ ISBN 978-0-19-922931-4
Basbøll၊ Hans (2005)၊ The Phonology of Danish၊ ISBN 0-203-97876-5
Basbøll၊ Hans; Wagner၊ Johannes (1985)၊ Kontrastive Phonologie des Deutschen und Dänischen၊ Max Niemeyer Verlag၊ ISBN 978-3-484-30160-3
Bauer၊ Laurie; Warren၊ Paul (2004)၊ "New Zealand English: phonology"၊ in Schneider၊ Edgar W.; Burridge၊ Kate; Kortmann၊ Bernd; Mesthrie၊ Rajend; Upton၊ Clive (eds.)၊ A handbook of varieties of English၊ 1: Phonology၊ Mouton de Gruyter၊ pp. 580–602၊ ISBN 3-11-017532-0
Brodersen၊ Randi Benedikte (2011)။ Islændinges udtale af dansk (in da)။ 15 February 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 17 January 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Collins၊ Beverley; Mees၊ Inger M. (1990)၊ "The Phonetics of Cardiff English"၊ in Coupland၊ Nikolas; Thomas၊ Alan Richard (eds.)၊ English in Wales: Diversity, Conflict, and Change၊ Multilingual Matters Ltd.၊ pp. 87–103၊ ISBN 1-85359-032-0
Collins၊ Beverley; Mees၊ Inger M. (2003) [First published 1981]၊ The Phonetics of English and Dutch (5th ed.)၊ Leiden: Brill Publishers၊ ISBN 9004103406
Connolly၊ John H. (1990)၊ "Port Talbot English"၊ in Coupland၊ Nikolas; Thomas၊ Alan Richard (eds.)၊ English in Wales: Diversity, Conflict, and Change၊ Multilingual Matters Ltd.၊ pp. 121–129၊ ISBN 1-85359-032-0
Elmquist၊ A. Louis (1915)၊ Swedish phonology၊ Chicago: The Engberg-Holmberg Publishing Company
Engstrand၊ Olle (1999)၊ "Swedish"၊ Handbook of the International Phonetic Association: A Guide to the usage of the International Phonetic Alphabet.၊ Cambridge: Cambridge University Press၊ pp. 140–142၊ ISBN 0-521-63751-1
Göksel၊ Asli; Kerslake၊ Celia (2005)၊ Turkish:acomprehensive grammar၊ Routledge၊ ISBN 978-0415114943
Iivonen၊ Antti; Harnud၊ Huhe (2005)၊ "Acoustical comparison of the monophthong systems in Finnish, Mongolian and Udmurt"၊ Journal of the International Phonetic Association၊ 35 (1): 59–71၊ doi:10.1017/S002510030500191X
Lass၊ Roger (2002)၊ "South African English"၊ in Mesthrie၊ Rajend (ed.)၊ Language in South Africa၊ Cambridge University Press၊ ISBN 9780521791052
Penhallurick၊ Robert (2004)၊ "Welsh English: phonology"၊ in Schneider၊ Edgar W.; Burridge၊ Kate; Kortmann၊ Bernd; Mesthrie၊ Rajend; Upton၊ Clive (eds.)၊ A handbook of varieties of English၊ 1: Phonology၊ Mouton de Gruyter၊ pp. 98–112၊ ISBN 3-11-017532-0
Peters၊ Jörg (2010)၊ "The Flemish–Brabant dialect of Orsmaal–Gussenhoven"၊ Journal of the International Phonetic Association၊ 40 (2): 239–246၊ doi:10.1017/S0025100310000083
Peterson၊ Hjalmar P. (2000)၊ "Mátingar af sjálvljóðum í føruyskum"၊ Málting၊ 28: 37–43
Recasens၊ Daniel (1996)၊ Fonètica descriptiva del català: assaig de caracterització de la pronúncia del vocalisme i el consonantisme català al segle XX (2nd ed.)၊ Barcelona: Institut d'Estudis Catalans၊ ISBN 978-84-7283-312-8
Roca၊ Iggy; Johnson၊ Wyn (1999)၊ A Course in Phonology၊ Blackwell Publishing
Romanian Academy (2005)၊ Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române (2nd ed.)၊ Bucarest: Editura Univers Enciclopedic
Stichting Kirchröadsjer Dieksiejoneer (1997) ၊ Kirchröadsjer Dieksiejoneer (2nd ed.)၊ Kerkrade: Stichting Kirchröadsjer Dieksiejoneer၊ ISBN 90-70246-34-1၊ 2015-09-19 တွင် မူရင်း အား မော်ကွန်းတင်ပြီး၊ 2018-10-23 တွင် ပြန်စစ်ပြီး
Suomi၊ Kari; Toivanen၊ Juhani; Ylitalo၊ Riikka (2008)၊ Finnish sound structure – Phonetics, phonology, phonotactics and prosody (PDF)၊ Studia Humaniora Ouluensia 9၊ Oulu University Press၊ ISBN 978-951-42-8984-2
Szende၊ Tamás (1994)၊ "Hungarian"၊ Journal of the International Phonetic Association၊ 24 (2): 91–94၊ doi:10.1017/S0025100300005090
Ternes၊ Elmar (1992)၊ "The Breton language"၊ in MacAulay၊ Donald (ed.)၊ The Celtic Languages၊ Cambridge University Press၊ pp. 371–452၊ ISBN 0-521-23127-2
Trudgill၊ Peter (2009)၊ "Greek Dialect Vowel Systems, Vowel Dispersion Theory, and Sociolinguistic Typology"၊ Journal of Greek Linguistics၊9(1): 80–97၊ doi:10.1163/156658409X12500896406041
တမ်းပလိတ်:Accents of English
Zimmer၊ Karl; Orgun၊ Orhan (1999)၊ "Turkish" (PDF)၊ Handbook of the International Phonetic Association: A guide to the use of the International Phonetic Alphabet၊ Cambridge: Cambridge University Press၊ pp. 154–158၊ ISBN 0-521-65236-7၊ 25 July 2018 တွင် မူရင်း (PDF) အား မော်ကွန်းတင်ပြီး၊ 17 January 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အရှေ့တစ်ဝက်အဝိုင်းသရ&oldid=726062" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၁:၄၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။